Godwin Matanga Archives - What's On In Harare
Home Godwin Matanga
Harare News 14 July 2021
Source: Govt reviews police checkpoint times – NewsDay Zimbabwe BY MIRAM MANGWAYA/TAFADZWA KACHIKO GOVERNMENT has barred police from blocking motorists entering city centres and allowed free travel of workers to and from work following concerns about delays at roadblocks. In a statement yesterday, Home Affairs minister Kazembe Kazembe said police would enforce lockdown regulations at […]
The post Govt reviews police checkpoint times appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …
Source: Police declare war on vaccination cards dealers – DailyNews POLICE commissioner-general Godwin Matanga has issued a stern warning to people offering fake Covid-19 certificates. This follows the unearthing of a syndicate believed to be selling Covid-19 vaccination cards to the public in Chitungwiza for US$25 each. The offence has since led to the arrest […]
The post Police declare war on vaccination cards dealers appeared first on Zimbabwe Situation. Zimbabwe Situation …